War - Dawaarid waa erey guud ee qaab kastoo qurxin ah oo lagu xardhay dharka leh cirbado iyo dun.
Kabaar-gacmeedku waa ereyga guud ee qaab kasta oo qurxin ah oo lagu dhejiyo dharka leh cirbadaha iyo dunta. Waxaa jira laba nooc oo daabac leh: Dawaar xariir ah iyo daabac baal ah. Xariir ama xarago ama dun kale ayaa lagu duraa cirbad naqshad gaar ah leh iyo midab ku dhejisan shaashad midab leh iyo midabbo ayaa lagu muday irbad si loo sameeyo qaab qurxan. Waa farshaxanka ku darista nashqadaynta iyo soosaarida bini aadamka wixii dhar ah ee jira iyadoo la isticmaalayo cirbado iyo dun. Xaraashka, oo taariikh ugu yaraan laba ama saddex kun oo sano ku leh Shiinaha, waa mid ka mid ah farsamada gacanta ee dhaqanka Shiinaha.
Xaraashkeennu wuxuu adeegsanayaa dhir, ubaxyo iyo sawir gacmeed lagu farsameeyay darbi saddex geesood ah, barkimooyin, muraayadaha, jeebka, madaxyada ， silsiladaha, kaatunada, hilqadaha, talyaaniyiinta 、 maaskaro, maro gacmeedyo, iwm. shayga asalka ah uumiga keega, ma aha oo kaliya inuu ka tarjumayo heerka Dahabka ee daabaclaha, sidoo kale wuxuu ka dhigayaa waxyaabaha kale ee aan caadiga ahayn in lagu daro xanaaq badan. Faahfaahinta waxqabadka xargaha xargaha, oo muujinaya soo jiidasho gaar ah.
Dahabku wuxuu leeyahay ruuxi ahaaneed, waa dhadhanka nolosha, midab cad oo iswaafajin ah, la'aanta meel male-awaal aan dhammaad lahayn. Xaraashku waa ereyga jacaylka, hadalka jilicsan ee cirbadda iyo dunta, marada madhan ayaa hibo u leh, mala-awaalka hodanka ah iyo quruxda badan ayaa qurxiya nolosha keligood ah, waxayna dhisaan muuqaal riyo iyo waqti gabay ah. Xirmada maaddada waxaa ka mid ah maro daabacan oo daabacan, dun xargo leh, cirbad la isku qurxiyay, tilmaamo sawir oo faahfaahsan. Alaabtu ma dhammaan, waxay u baahan yihiin in gacan lagu sameeyo, waxay ku habboon yihiin bilowgayaasha inay bilaabaan, Saaxiibbada ku ciyaaraya cirbadaha iyo dunta markii ugu horreysay, ha ka welwelin, alaabada daabacan waxaa lagu qalabeeyaa fiidiyow sare oo qeexan oo faahfaahsan, raac fiidiyaha waa la dhammaystiri karaa, adiga iyo daabacaadda erayga xiriir fog. "Adduunku maahan qurux la'aan, kaliya indho la'aan in la helo qurux", waxyaabo badan oo caadi ah, ayaa had iyo jeer la iska indhatiraa wadnaha mashquulsan.
Waxaa laga yaabaa in noloshu aysan wada fiicneyn, laakiin ilaa iyo inta uu jiro jacayl nolosha, oo ku faraxsan abuurista qalbi qurux badan, ka dibna tartiib tartiib, noloshu waxay kuu noqon doontaa waxaad rabto. Ilaa iyo inta qalbiga, waxyaabaha caadiga ah ay sidoo kale noqon karaan wax aan caadi ahayn, ilaa iyo inta ay qalbiga ka raalli yihiin, nolosha caadiga ah waxaa la siin doonaa macnaheeda gaarka ah!